Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa, Hayile-maariyaam Dessaalegn jijjiirama biyyattii keessatti taasisamaa jiru shaffisiisuuf jecha fedhii isaaniin taayitaa gad-lakkisuuf xalayaa galfachuu isaanii eega kaleessa beeksisanii booda, Itiyoophiyaatti Embaasiin Yunaayitid Isteets, ibsa of-eeggannaa nageenyaa baasee jira.
Tarkaanfiin siyaasaa kun gama nageenyaan dhgiibbaa inni Itiyoophiyaa keessatti fidu amma beekuudhaa baanne iyyuu, jijjiiramni siyaasaa guddaan kun dhimmoota nageenyaatti geessuu akka malu kan dubbate – ibsi Embaasichaa, tarkaanfii kana hordofee waan Itiyoophiyaa keessatti tahuuf jiru kan dhiheenyaan hordofaa jiru tahuu beeksise.
Yeroo ammaatti, hojjetaan Embaasichaa kamiyyuu, Finfinnee dhaa alatti imaluu isaa dura, Embaasicha irraa ehama argachuu qaba – jedha.
Kana malees, haala jiru, karaa safbaa-himaalee biyya keessaa akka hordofan, bakka namoonni itti walitti-qabaman irraa akka fagaatan, qajeelfamoota aangawoota naannoo akka hordofan kan akeekkachiise – Embaasichi, akka dhuunfaadhaan of-eegganaa shaakalanii fi qophiilee dabalee naannawwa isaanii hubannoon ilaalanis hubachiisee jira.
Haalli nageenyaa Itiyoophiyaa keessaa raaafamaa tahuu isaa fi otuu hin beekamiin kan hammaachuu malu tahuu akka hubatanis akeekkachiisee jira.